Tranonkala Rosiana Iray Mampiasa Ny Tambajotra Selan-Koza-Tatitra Hanambàrana Sary, Mamoaka Sary Mahatalanjona · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 31 Marsa 2016 19:56 GMT
Vakio amin'ny teny Español, বাংলা, Français, नेपाली, Ελληνικά, Nederlands, русский, عربي, English
Sary toe-tany amin'ny hay famoronana OVNI, araka ny fiangalin'i Van Gogh? Nahoana tokoa moa. Sary avy amin'ny ostagram.ru.
Te-hamadika ny sarinao tahaka ny fanaovan'i Van Gogh azy ve ianao? Afa-manao izany ianao ankehitriny. Misy tetikasa rosiana iray antsoina hoe Ostagram mamela ny mpiserasera aterineto hanambatra ny saripika amin'ny asan-javakanto hananganana sary mahavalalanina izay mety ho tsy diso toerana ao amin'ny Opera hay famoronana [Sci-fi] Alice ao an-tanim-pitalanjonana [Alice au pays de merveilles].
Sary avy amin'ny ostagram.ru.
Ny tetikasa Ostagram, natsangan'ny mpisera Sergey Morugin, dia servisy an'aterineto mampiasa ny algôritiman'ny solosaina hanambàrana ny votoatin'ny sary iray amin'ny fiangalin-tsary iray amin'ny fampiasana ny tambajotra selan-koza-tatitra mpampifandray. Ny dikan'izany dia hoe afa-mahazo ny sarin'ny alikanao ho lasa toy ny hosodokon'i Monet ianao, raha raisinao ho loharanom-botoaty ny sarin'ny alika, ary ny asakanton'i Monet kosa indray no loharanom-piangaliana.
Ny mpikaroka ao amin'ny Google, izay efa nanao fanandramana tamin'ny tambajotran-tselan-koza-tatitra namboarin'olombelona sy ny famantaran-tsary no niantso ity teknika fampitambarana ity ho Inceptionism, izay niainga avy amin'ny taopanorenana selan-koza-tatitra lalina an'aterineto sy ny sarisoratra “We need to go deeper” [mila mandeha lalina kokoa isika] avy amin'ny sarimihetsika Inception, ary io sarimihetsika io dia fandinihana ny fifandraisan'ny nofy amin'ny zavamisy ihany koa.
Nanamboatra ny kaodin'izany algôritima an'aterineto izany, nananganany ny Ostagram, ho azon'ny rehetra ampiasaina ao amin'ny GitHub i Morugin ary niteny fa miankina amin'ny asan'ny hafa mpanao kaody, toa an'i Leon Gatys, Alexander Ecker, ary i Matthias Bethge ny fampitambarana ny fiasan'ny tambajotran-tselan-koza-tatitra sy ny algôritimam-piangaliana zavakanto iray.
Andao anie hojerena ny sary “Inceptioniste” mahavalalanina nivoaka avy amin'ny fampidiran-tsary nataon'ny mpiseraseran'ny Ostagram eto ambany, na ny tsaratsara kokoa, misorata anarana ao amin'ny tranonkala dia mamorona ihany koa ho anao.